पक्कै पनि सबैले जासूस वा गुप्तचर को भूमिका मा कम्तिमा केही घण्टा रहन चाहन्छ। मंच पूर्णतया आफ्नो इच्छा महसुस गर्न मद्दत गर्न पनि भने "एन्ड्रोइड"। हामी पहिचान र अरूको इच्छा कुनै पनि जानकारी विपरीत संग प्रयोगकर्ता प्रदान गर्दछ विशेष जासूस सफ्टवेयर बारेमा कुरा गर्दै छन्।
सबै, सुन्न थाहा र हेर्न - एक गुप्तचर कुरा को लागि। यहाँ, कि क्रममा, र हामी "एन्ड्रोइड" को लागि सबै भन्दा राम्रो स्पाइवेयर विचार गर्नुहोस्। सुरू गरौं।
कान जासूस: सुपर सुनवाई
यो एकदम एक रोचक र-गर्न-सजिलो सिक्न अनुप्रयोग हो। "प्ले स्टोर" प्रयोगकर्ता मूल्याङ्कन उपकरण गर्न deservedly4अंक देखि दायरा, प्लस सकारात्मक समीक्षा धेरै। "एन्ड्रोइड" को लागि यो स्पाइवेयर आफ्नो ग्याजेट र हेडसेट सुन्न उपकरणको परिवर्तन को लागि प्रभावशाली संभावनाहरु छ, राम्रो, आफ्नो श्रवण मा - यो कसरी समायोजन गर्न छ।
impossibly सरल अनुप्रयोगको सञ्चालन सिद्धान्त:, आफ्नो उपकरणमा सफ्टवेयर स्थापना यसलाई सक्रिय एक वायरलेस प्रोटोकल "ब्लुटुथ" मार्फत हेडसेट जडान र कोठा जहाँ आवश्यकता wiretapping मा हेडफोन तान्नुहोस्। यसबाहेक, सम्पूर्ण प्रक्रिया ठीक, र एक टेलिफोन कुराकानी सुनेर जस्तै संगठित छ।
को "एन्ड्रोइड" को लागि जासूस सफ्टवेयर लाभ:
सरल र सहज इन्टरफेस;
आधुनिक एमपी -3 अडियो ढाँचामा कुराकानी को रेकर्डिङ;
पूर्ण निःशुल्क आवेदन;
कुनै आक्रामक विज्ञापन र अन्य स्पाम।
को हेडसेट गर्न fastidiousness सफ्टवेयर;
रेकर्डिङ लागि एउटा मात्र अडियो ढाँचा;
टेढो स्थानीयकरण (धेरै गल्ती);
wiretapping क्षेत्र "ब्लुटुथ" -module (10 मीटर) यसद्वारासीमाबद्ध;
ध्वनि गुणवत्ता बिजुली उपकरण नजिक मा निर्भर गर्दछ।
यसलाई "एन्ड्रोइड" र iOS लागि छाँटकाँट जासूसी कार्यक्रम, छ, "स्याउ" ग्याजेटहरू को मालिक पनि फाइदा लिन सक्षम हुने टिप्पण लायक छ।
वाइफाइ जासूस - एकदम सरल र एकै समयमा लागि आफ्नो ग्याजेट प्रभावकारी अनुप्रयोग हो। सदस्यहरूले चार अंक मा एक मुद्रा को उपयोगिता को उपयोगिता सराहना र सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै सफ्टवेयर उपयोगिता संकेत गर्छ। "एन्ड्रोइड" को लागि यो स्पाइवेयर गोप्य vayfay नेटवर्क स्कैन र जडान प्रयोगकर्ताहरूको संख्या सेट गर्छ। साथै, सफ्टवेयर प्रत्येक जडान भएको उपकरण (आईपी) को र केही अवस्थामा पनि म्याक समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ मा आन्तरिक ठेगाना थाहा मदत गर्छ।
शायद साधारण प्रयोगकर्ता ", एन्ड्रोइड" थाहा यो अनुप्रयोगको लागि रूपमा स्पाइवेयर छैन तर नेटवर्कमा पिंग जडानहरू को दायरा लागि एक साधारण उपकरण रूपमा। सफ्टवेयर को संभावना, पाठ्यक्रम, छैन अपार हो, तर रातो कि थप।
औसत प्रयोगकर्ता इन्टरफेस लागि बुझ्ने;
यो धेरै "फोहोर" बिना केवल आन्तरिक ठेगाना दिन्छ;
यो मंच र smartly काम लोड छैन।
विज्ञापन कष्टप्रद स्पाम र सम्बन्धित उत्पादनहरु;
अन्य अन्त लायक ICMP-गुन्जन लक छ भने सफ्टवेयर बेकारी छ;
बाहेक आईपी-समन्वय, को जडान बारेमा कुनै पनि थप जानकारी यन्त्र प्रदान गर्दैन।
HD जासूस क्यामेरा
यो "एन्ड्रोइड" को लागि एक धेरै सुविधाजनक र अपेक्षाकृत विश्वसनीय स्पाइवेयर छ। लगभग चार अंक को मुख्य रूप सकारात्मक तरिकामा उपयोगिता र मूल्यांकन बारेमा समीक्षा एकदम जायज छ। यसलाई आफ्नो आन्तरिक स्मृति मात्र3एमबी लिन्छ किनभने आवेदन, स्पार्टन सकिन्छ।
सही काम गर्न, "एन्ड्रोइड" को लागि जासूस सफ्टवेयर तस्वीर लिन केही ठाउँ चाहिएको छ। यसलाई इच्छित रेकर्डिङ मोड 10 सेकेन्ड को photographing अन्तरालहरू, उदाहरणका लागि, सेट वा 15 मिनेट एक घण्टा एक पटक भिडियो शूट गर्न आवश्यक पनि छ।
छुट्टै फोल्डर, जो कार्यक्रम आवश्यक भएमा को माध्यम द्वारा coded गर्न सकिन्छ भण्डार दृश्य। को कल वा एसएमएस को रसिद समावेश जो एक "उडान" मोड, मा ग्याजेटको "काम" को समयमा। साथै, यस्तो क्लिक वा कंपन रूपमा पारंपरिक मोड, को क्यामेरा को कुनै पनि ध्वनि पनि छोडिन्छ।
उपयोगिता को लाभ:
समायोजन विन्डो चाँडै हेर्दै र पारदर्शिता समायोजन;
धेरै विन्यास मोड क्यामेरा (अन्तरालहरू, कारक, आदि ...) सक्षम र असक्षम;
जासूस मोडमा बिल्कुल noiseless काम;
तस्वीर लिन र भिडियो ग्याजेट सक्रिय मिलाउ मौका;
कम्पन उपकरणको कुनै पनि चरण प्रयोगकर्ता सचेत।
आवेदन स्क्रिन लक मोड बन्द;
अफलाइन रूसी स्थानीयकरण;
डिग्री शटर (ठाउँमा frontal निर्देशन) गर्न fastidiousness;
कष्टप्रद विज्ञापन को एक प्रशस्त र जडान विच्छेद छैन।
यहाँ यो अनुमति र तिनीहरूले जसलाई निर्देशित छन् ती ज्ञान बिना कार्यक्रम यस प्रकारको को प्रयोग, कानून द्वारा निषेधित छ चेतावनी गर्न आवश्यक छ। हरेक व्यक्ति गोपनीयता एउटा सही छ र यसको उल्लंघन मा सबै भन्दा राम्रो एक दण्ड entail, र मा खराब - आपराधिक पेनाल्टी।
निस्सन्देह, यी अनुप्रयोगहरू को राम्रो आधा, कि छ, साना उमेर समूह मा डिजाइन गरिएको छ, र कुनै पनि गम्भीर प्रतिबंध को डर आवश्यक छैन हुन। अर्कोतर्फ, Jokes jokes, तर के तपाईंलाई थाहा छ र स्पष्ट आफ्नो कार्यहरूको परिणाम बुझ्न आवश्यक सीमित।
एक समीक्षा: तपाईँको कम्प्युटरमा गति गर्न कार्यक्रम
हामी समतल राख्नु एउटा कार्यक्रम आवश्यक? यहाँ केही परिचित
"Yandex ब्राउजर", "Google Chrome" र "ओपेरा" कसरी हटाउने
पुरानो adnexitis कस्तो व्यवहार गर्न
सबै सफल वार्तालापहरूमा सामान्य विशेषताहरू छन्। कसलाई पत्ता लगाउनुहोस्
पेट दुख्यो - सबै भन्दा साधारण छोराछोरीको उजुरी
काम सप्ताह कसरी लामो छ?
ओवन मा कड कसरी खाना पकाउनु